ဟဒီးဆ်: အကြင်သူသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်တစ်စုံတစ်ရာကို ရှိရ်က် ယှဉ်တွဲကိုးကွယ်ခြင်းမပြုဘဲ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့လျှင် ဂျန္နသ်သုခဘုံသို့ဝင်ရောက်ရမည်။ အကြင်သူသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့် တစ်စုံတစ်ရာအား ရှိရ်က် ယှဉ်တွဲကိုးကွယ်မှုပြု၍ အရှင်မြတ်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့လျှင် ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံသို့ ဝင်ရောက်ရမည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: အကြင်သူသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်တစ်စုံတစ်ရာကို ရှိရ်က် ယှဉ်တွဲကိုးကွယ်ခြင်းမပြုဘဲ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့လျှင် ဂျန္နသ်သုခဘုံသို့ဝင်ရောက်ရမည်။ အကြင်သူသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့် တစ်စုံတစ်ရာအား ရှိရ်က် ယှဉ်တွဲကိုးကွယ်မှုပြု၍ အရှင်မြတ်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့လျှင် ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံသို့ ဝင်ရောက်ရမည်။
အမျိုးအစား: အကီဒဟ် ယုံကြည်ချက်။ . အမည်နာမများနှင့် အမိန့်ပညတ်ချက်များ။ . တုဖက်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ .
عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ لَقِيَ الله لا يُشْرِك به شَيئا دخل الجنَّة، ومن لَقِيَه يُشرك به شيئا دخَل النار".
ဂျာဗိရ်ဗင်န်အဗ်ဒုလ္လာဟ် (ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟုမာ)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က မိန့်ကြားတော်မူသည်။ အကြင်သူသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်တစ်စုံတစ်ရာကို ရှိရ်က် ယှဉ်တွဲကိုးကွယ်ခြင်းမပြုဘဲ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့လျှင် ဂျန္နသ်သုခဘုံသို့ဝင်ရောက်ရမည်။ အကြင်သူသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့် တစ်စုံတစ်ရာအား ရှိရ်က် ယှဉ်တွဲကိုးကွယ်မှုပြု၍ အရှင်မြတ်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့လျှင် ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံသို့ ဝင်ရောက်ရမည်။
ဤဟဒီးဆ်သည် ဆွဟီးဟ် အဆင့်ရှိသည်။ - မွတ်စ်လင်မ်ကျမ်း။
ဤဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော်တွင် တမန်တာ်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးမိန့်ကြားထားသည်မှာ အကြင်သူသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ မွေးမြူဖန်ဆင်းတော်မူခြင်း၌လည်းကောင်း၊ ခဝပ်ကိုးကွယ်မှုခံထိုက်ခြင်း၌လည်းကောင်း၊ ဂုဏ်တော်နာမတော်များ၌လည်းကောင်း တစ်စုံတစ်ရာကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်အတူ ယှဉ်တွဲကိုးကွယ်ခြင်းမပြုဘဲ သေဆုံးခဲ့လျှင် ဂျန္နသ်သုခဘုံသို့ဝင်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အား ယှဥ်တွဲကိုးကွယ်သူ (မွရှ်ရိက်)အဖြစ်နှင့် သေဆုံးခဲ့လျှင် ၎င်းသူ ပြန်လှည့်ရမည့် နေရာဌာနသည် ဂျဟန္နမ်ငရဲမီးပင်ဖြစ်သည်။
ဘာသာပြန်: အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ် စပိန် တူရကီ အုရ်ဒူ အင်ဒိုနီးရှား ဘော့စနီးယား ဘင်္ဂလီ တရုတ် ဖါရစီ(ပါရှန်း) တဂ္ဂလော့ ဟင်ဒီ ဆင်ဟာလီ ဝီဂါ ကာ့ဒ် ဟောက်ဆာ ပေါ်တူဂီ မလေးရာလမ် တေလဂူ ဆွာဟီလီ တမီးလ်
အကြင်သူသည် သောင်ဟီးဒ်တရားပေါ်တွင် သေဆုံးကွယ်လွန်ခဲ့လျှင် ဂျဟန္နမ်ငရဲမီးတွင် အမြဲထာဝရမနေထိုင်ရပေ၊ ၎င်းသူ ပြန်လှည့်ရာ နေရာဌာနသည် ဂျန္နသ်သုခဘုံပင်ဖြစ်သည်။
အကြင်သူသည် ရှိရ်က် ဖက်စပ်ကိုးကွယ်မှု ကျူးလွန်၍ သေဆုံးကွယ်လွန်ခဲ့လျှင် မုချ ဂျဟန္နမ်ငရဲမီးသို့ လားရမည်ဖြစ်သည်။
ဂျန္နသ်နှင့် ဂျဟန္နမ် နှစ်ခုစလုံးသည် လူသားနှင့်နီးကပ်ပြီး ၎င်းနှင့် ထိုဌာနနှစ်ခုကြား၌ သေခြင်းတရားသာ ခြားထားသည်။
ရှိရ်က်ဖက်စပ်ကိုးကွယ်မှုမှ စိုးရိမ်စိတ်ထားရန်အရေးကြီးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဂျဟန္နမ်မှလွတ်မြောက်ရန် စည်းကမ်းချက်မှာ ရှိရ်က် ဖက်စပ်ကိုးကွယ်မှုမှ ကင်းရှင်းခြင်း ဖြစ်သည်။
ဂျဟန္နမ်မှလွတ်မြောက်ခြင်းသည် အမလ်ကောင်းမှု များပြားခြင်းအပေါ်တွင် မမူတည်ဘဲ ရှိရ်က် ဖက်စပ်ကိုးကွယ်မှု ကင်းရှင်းခြင်းပေါ်တွင်သာ မူတည်သည်။
(လာအိလာဟအိလ္လလ္လာဟ်) ၏အဓိပ္ပာယ်ကို တင်ပြထားသည်။ ၎င်းမှာ ရှိရ်က် ဖက်စပ်ယှဉ်တွဲကိုးကွယ်မှုကို စွန့်လွှတ်ပြီး အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် တစ်ဆူတည်းကိုသာ ခဝပ်ကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ရှိရ်က် ဖက်စပ်ကိုးကွယ်မှုမှ ကင်းစင်သူ၏ မွန်မြတ်မှုကို တင်ပြထားသည်။
ဂျန္နသ် သုခဘုံနှင့် ဂျဟန္နမ် ငရဲဘုံတို့အား အတည်ပြုထားသည်။
လုပ်ရပ်များ၏ အကျိုးဆက်သည် ၎င်း၏ နိဂုံးလုပ်ဆောင်ချက်များပေါ်တွင် မူတည်သည်။
အကီဒဟ် ယုံကြည်ချက်။ . အမည်နာမများနှင့် အမိန့်ပညတ်ချက်များ။ . တုဖက်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ .
ထွတ်မြတ်မှုများနှင့် အာဒါဗ်စည်းကမ်းများ။ . နှလုံးသားကို နူးညံ့စေသော ဆုံးမဩဝါဒများ။ . ဂျန္နသ်နှင့် ဂျဟန္နမ် အကြောင်းအရာများ။ .
အို-အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ကျွန်တော်မျိုး၏ ကဗရ်အား ကိုးကွယ်ရာအဖြစ်မပြု လုပ်လိုက်ပါနှင့်။ မိမိတို့နဗီတမန်တော်များ၏ ကဗရ်များကို ဦးချရာနေရာများအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြသော အမျိုးသားတို့အား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်အလွန်အမျက်ထွက်တော်မူသည်။
အကြင်သူသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှအပ အခြားတစ်စုံတစ်ရာဖြင့် ကစမ်ကျိန်ဆိုခဲ့လျှင် ထိုသူသည် (ကုဖ်ရ်)သွေဖည်ငြင်းပယ်မှု သို့မဟုတ် (ရှိရ်က်) ဖက်စပ်ယှဉ်တွဲမှု ပြုခြင်းဖြစ်သည်။
ငါကိုယ်တော်သည် အသင်တို့အတွက် အစိုးရိမ်ဆုံးကိစ္စမှာ ရှိရ်က် အဆ်ွဂရ်(ရှိရ်က် အသေးစား)ပင်ဖြစ်သည်။ ဤသည် အဘယ်ရာပါနည်း ဟုမေးမြန်းလျှောက်ထားခြင်းခံရသည့်အခါ ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစ္စလာမ် )က ပြစားမှုဖြစ်သည်ဟု ဖြေကြားတော်မူခဲ့သည်။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က ဟလာလ် ဟူ၍ သတ်မှတ်ထားသည်တို့ကို ၎င်းတို့က ဟရာမ် ဟူ၍ သတ်မှတ်လိုက်သည့်အခါ အသင်တို့သည်လည်း ဟရာမ် ဟူ၍ပင် သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်မဟုတ်လော။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က ဟရာမ် ဟူ၍ သတ်မှတ်ထားသည်တို့ကို ၎င်းတို့က ဟလာလ် ဟူ၍ သတ်မှတ်လိုက်သည့်အခါ အသင်တို့သည်လည်း ဟလာလ် ဟူ၍ပင် သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်မဟုတ်လော။ ထိုအခါ ကျွန်တော်က ဟုတ်ပါသည်ဟု ဖြေကြားခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်က ဤသည်ပင် ၎င်းတို့အား ခဝပ်ကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည် ဟုမိန့်ကြားခဲ့သည်။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)သည် နုရှ်ရဟ်(ဂျာဒူစုန်းပယောဂအား ဂျာဒူစုန်းပယောဂဖြင့် ဖြေပေးခြင်း)နှင့် ပတ်သက်၍ လျှောက်ထားမေးမြန်းခြင်းခံရသည့်အခါ ကိုယ်တော်က ဤသည် ရှိုင်သွာန်၏ လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်ဟု မိန့်ကြားတော်မူခဲ့သည်။
အကြင်သူသည် (အတိတ်နိမိတ်ဆိုးကောက်၍) ထိုနိမိတ်ဆိုးကောက်ခြင်းက သူရည်ရွယ်ထားသည့်ကိစ္စကို ရပ်ဆိုင်းစေခဲ့လျှင် ထိုသူသည် ရှိရ်က်အမှုကို ကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်သည်။ သာဝကြီးများက ထိုပြစ်မှုအတွက် အပြစ်ပြေပျောက်စေမည့်အရာ (ကဖ္ဖာရဟ်) မှာအဘယ်အရာပါနည်း ဟု မေးလျှောက်ခဲ့ကြရာ ကိုယ်တော်က အောက်ပါအတိုင်း တောင်းဆုပြုရန် မိန့်ကြားတော်မူသည်။ ( အို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် အရှင်မြတ်ထံရှိသည့် ကောင်းချီးမင်္ဂလာမှအပ အခြားကောင်းချီးမင်္ဂလာဟူ၍ မရှိ၊ အရှင်မြတ်သတ်မှတ်ထားသည့် ပြစ်ဒဏ်၏ မကောင်းမှုမှအပ အခြားနိမိတ်ဆိုးဟူ၍မရှိ၊ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှအပ အခြားခဝပ်ကိုးကွယ်ခြင်းခံထိုက်သော အရှင်မရှိ။)
မည်သူမဆို ငါကိုယ်တော်အတွက် မိမိ၏ပါးစောင်နှစ်ခုကြားတွင်ရှိသော အရာ(နှုတ်လျှာ)နှင့် ခြေနှစ်ချောင်းကြားတွင်ရှိသော အရာ(အရှက်အင်္ဂါ)ကို ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ယူလျှင် ငါကိုယ်တော်သည် ထိုသူ့အတွက် ဂျန္နသ်သုခဘုံကို တာဝန်ယူတော်မူသည်။
عربي English Français Español Türkçe اردو Indonesia Bosanski বাংলা ভাষা 中文 فارسی Tagalog हिन्दी සිංහල ئۇيغۇرچە كوردی Hausa Português മലയാളം తెలుగు Kiswahili தமிழ்
+ရှင်းလင်းချက် +အင်္ဂလိပ် +ပြင်သစ် +စပိန် +တူရကီ +အုရ်ဒူ +အင်ဒိုနီးရှား +ဘော့စနီးယား +ဘင်္ဂလီ +တရုတ် +ဖါရစီ(ပါရှန်း) +တဂ္ဂလော့ +ဟင်ဒီ +ဆင်ဟာလီ +ဝီဂါ +ကာ့ဒ် +ဟောက်ဆာ +ပေါ်တူဂီ +မလေးရာလမ် +တေလဂူ +ဆွာဟီလီ +တမီးလ်